PESTLE Analysis - Akyanpay
စက်ရုံအတွင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဓလေ့တွေက company တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ အများကြီးအရေးပါသလို အပြင်ကအကြောင်းအရာတွေကလည်း အရေးကြီးတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရှုံးနိမ့်စေတဲ့ အချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်။
1. Failure to anticipate အနာဂတ်ကို ကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်း
2. Lack of follow through ပြင်ဆင်ထားတာကို ထိထိရောက်ရောက်အကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိခြင်း
3. Our own psychology and mindset လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ business mastery မှာ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းလေ့လာရတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Losers react. Winners anticipate. ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလောကမှာ ရှုံးနိမ့်သူတွေက အလန့်တကြားတုန်ပြန်ကြတယ်။ အောင်နိုင်သူတွေက အနာဂတ်ကို ကြိုတင်မှန်းဆထားတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်သူတွေက အနာဂတ်မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နည်းပညာ အပြောင်းအလဲတွေ၊ အခြေအနေတွေကို မှန်းဆပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတယ်။
ရှုံးနိမ့်သူတွေကတော့ ဒုက္ခရောက်မှ ဘုရားတတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အခက်အခဲကြုံမှ ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ ခေါင်းစားကြတတ်တယ်။ အခုလို Covid-19 နဲ့ Coup တွေကြုံရတဲ့ကာလမှာ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်မှုက အရင်ကထက်ပိုအရေးကြီးလွန်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းအနာဂတ်အတွက် တစ်ပတ်ကို မိနစ်ကိုးဆယ်လောက် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အကြီးပိုင်းတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ နည်းပြ၊ အကြံပေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အိုင်ဒီယာနဲ့ plan တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်ငန်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကို ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်မှ အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ဖက်က ဝန်ထမ်းတွေ၊ စနစ်တွေကို သေချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။​ ဝန်ထမ်းတွေမှာ ကိုယ့် plan ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း၊ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စနစ်ကောင်း၊ မူကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။
3. Our own psychology and mindset လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးစီးဦးရွက်ပြုရတယ်ဆိုတာ သာမာန်တစ်ရက်တာကို ဖြတ်သန်းရတာနဲ့ မတူပါဘူး။​ လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ၊​ ဖောက်သည်ရေးရာ အစရှိတဲ့ အကန့်ပေါင်းများစွာကို ဦးစီးဦးရွက်ပြုလုပ်ရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာ သာမာန်ထက် သန်မာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။​ ပြဿနာဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား စိန်ခေါ်မှုဆိုတဲ့ စကားလုံးအစားထိုးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ (problem = challenge) နောက် အရှိကိုအရှိအတိုင်းမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ရှိတဲ့အခြေအနေကို အဆိုးမမြင်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက် လက်ရှိအခြေအနေကို ဒီထက်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချက်သုံးချက်ကို သေချာစဥ်းစားသုံးသပ်ပြီး လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းကို လက်ရှိထက်ပိုအောင်မြင်စေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အနာဂတ်ကို anticipate လုပ်နိုင်ဖို့ PESTLE or PEST Analysis နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။
PEST analysis လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့် ၅ ဆင့် (External Environment Analysis)
စက်ရုံအတွင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဓလေ့တွေက company တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ အများကြီးအရေးပါသလို အပြင်ကအကြောင်းအရာတွေကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေက ကိုယ့်စီးပွားရေးရဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအရေးပါနေသလဲဆိုတာကိုတော့ PEST (Political, Economic, Social and Technological) Analysis နဲ့လေ့လာသုံးသပ်လို့ရတယ်။
ဒါကတော့ အစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ တရားဥပဒေတွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက Business တစ်ခုကို အမြတ်ရစေနိုင်လား၊ အောင်မြင်စေနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကို ဆန်းစစ်တာ။ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့့ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ရပါမယ်။
ဒါကတော့ ကိုယ့် Business က စျေးကွက်ထဲမှာဝင်ပြိးယှဉ်နိုင်၊မယှဉ်နိုင်သိရဖို့ နေရာဒေသတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်တာပါ။ Customer တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ နဲ့ သူတို့ဝယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါဝင်မယ်။ အသက်အရွယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာအရေအချင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုထည့်စဉ်းစားရမယ်။
Product ကို စျေးကွက်ဆီအရောက်ပို့ဖို့ နည်းလမ်းတွေလေ့လာတာပါ။ နည်းပညာ အဆင့်မြှင့်တာက Product ထုတ်လုပ်မှုကိုအဆင်မြှင့်စေသလို စျေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ဖို့လည်း လွယ်ကူစေတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရရဲ့နည်းပညာအပေါ်အသုံးစရိတ်၊ နည်းပညာအဆင့်မြှင့်မှု၊ အင်တာနက်နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုပါ လေ့လာဆန်းစစ်ထားဖို့လိုမယ်။
ကိုယ့် Business နဲ့ဆိုင်မဲ့ အပြင်ကသတင်းအချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှစုစည်းထားပါ။ တချို့သတင်းအချက်အလက်တွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာလို့ရသလို၊ တချို့ကိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသုသေသနလုပ်ဖို့လိုမယ်။
၃) အခွင့်အရေးတွေကို ဆန်းစစ်ပါ။
လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို စုဆောင်းထားပြီးပြီဆိုရင် ဒီအပြောင်းအလဲတွေက ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာပါ။ ဥပမာ ဒါတွေက ကိုယ် Product တစ်ခုအသစ်ထုတ်ဖို့ လွယ်ကူစေသလား။
အပြောင်းအလဲကယူဆောင်လာမဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုသလို ကိုယ့်ကိုခြိမ်းခြောက်လာနိုင်မဲ့ အရာတွေကိုလည်း ဆန်းစစ်ထားရမယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက ကိုယ့်အတွက် ပြဿ နာတွေလျော့နည်းသွားစေမယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကိုယ်သွားနေတဲ့ Market က ထိုးကျတော့မယ်ဆိုတာသိရင် တခြားနေရာတွေမှာစျေးကွက်ဖောက်ဖို့ ကြိုပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့။
အခွင့်အလမ်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးပြီဆိုရင် ဒါတွေကို Business Plan ထဲထည့်ပြီ အသုံးချဖို့ အချိန်ကျပြီ။ Risk တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပြီး Risk ကိုရှင်းထုတ်ဖို့၊ မရှင်းထုတ်နိုင်ရင်တောင်လျော့ချဖို့ကြိုးစားပါ။
အပေါ်မှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့် Business အတွက် PEST Analysis ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်မှာပါ။
​PEST Analysis လုပ်ဆောင်ရန်။
Templateများ အသုံးပြုပုံ - Previous